पाँच सय घट्यो सुनको मूल्य, कारोबार कतिमा? – onlinekantipur.com
पाँच सय घट्यो सुनको मूल्य, कारोबार कतिमा?
आज सुनको मूल्य तोलामा पाँच सय रुपैयाँ घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य तोलाको ९९ हजार रुपैयाँ कायम भएको हो।
हिजो छापावाल सुन तोलाको ९९ हजार पाँच सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। यस्तै आज तेजाबी सुनको मूल्य तोलाको ९८ हजार पाँच सय रुपैयाँ निर्धारण भएको छ।
यसैगरी चाँदीको मूल्य पनि तोलामा पाँच रुपैयाँले बढेको छ। हिजो एक हजार तीन सय ७५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज एक हजार तीन सय ८० रुपैयाँ निर्धारण भएको छ।
समाजको उन्नयनका लागि महिलाको भूमिका महत्वपूर्णः मन्त्री राई
पोखरा–धनगढी सिधा हवाई सेवा सुरु